Iinjongo zerhafu kunye ne-TIN-Foster Swiss
Yazi yonke into oyifunayo malunga nenombolo yesazisi okanye i-TIN
LAmaziko emali anokucinga ngokucela ulwazi kumthengi kubanikazi beakhawunti. Amaziko emali kufuneka abonisane nabacebisi babo ukuba aqinisekise ukuba imisebenzi yabo enxulumene ne-CRS, kubandakanya neendlela zokuziqinisekisa eziqokelelwa kwabo banama-akhawunti, bayithobela yonke imithetho yesizwe esebenzayo. I-BIAC ngumbutho ozimeleyo wamashishini ozinikezele ekuboneleleni nge-OECD yeshishini kwimiba eyahlukeneyo yemigaqo-nkqubo yehlabathi.
Yintoni iNombolo yeSazisi okanye i-TIN?
Inombolo yokwazisa ngerhafu, eyaziwa ngcono ngegama lesiNgesi, TIN, linani elinamanani alithoba asetyenziswa njengenombolo yokulandela umkhondo yi-United States Revenue Service (IRS). Iinombolo zoKhuseleko lweNtlalo (i-SSN) ziinombolo zokuchongwa kwirhafu umntu ngamnye, kwaye zikhutshwa liCandelo loLawulo loKhuseleko lweNtlalo (i-SSA) kwifomathi ye-XXX-XX-XXXX Iinombolo zokuzazisa zerhafu yomqeshi zinikezelwa kwiinkampani yi-IRS. La manani nawo anazo iinombolo ezisithoba, kodwa zifundwa njengeXX-XXXXXXX. Inombolo yokwazisa yerhafu iyafuneka kuzo zonke iifom zerhafu ezifakwe kwi-IRS.
Amanani okuchonga iRhafu
nombolo ye-ID yakhethi yokuhlawula umntu ohlawula i-Adoption (i-ATIN) linombolo yexeshana elithoba ekhutshwe yi-IRS kubantu abakwinkqubo yokwamkela ngokusemthethweni ummi wase-U.S. okanye umhlali womntwana, kodwa ongakwaziyo ukufumana i-SSN ngexesha. IFomu i-W-7A, isicelo seNombolo yokuZazisa kaMrhafi yokuThengiswa kweMvume eMbusweni eUnited States isetyenziselwa ukucela i-ATIN
Ukuba ungumrhwebi werhafu, kufuneka usebenzise inombolo eyiyo yokuchonga irhafu (PTIN) kwimbuyekezo oyilungisileyo. Sebenzisa i-PTIN akusekho ngokokukhetha. Ukuba awunayo i-PTIN, kufuneka ufumane enye usebenzisa inkqubo yobhaliso lwe-IRS entsha. Kuya kufuneka usebenzise iFom W-12, isicelo se-IRS Paif Preparer.
nombolo ye-ID yomqeshi (i-EIN) inombolo yokuphawula irhafu. Isetyenziselwa ukwalatha ishishini. Isetyenziselwa iipropathi kunye neetrasti ezinengeniso. Ifuna ukwaziswa ngefomu engu-1041 yeSibhengezo seRhafu yeNgeniso yePhondo kunye ne-United States.
Kuya kufuneka ugcwalise iFom-SS-5, isicelo seKhadi loKhuseleko loLuntu. Kuya kufuneka unikeze ubungqina besazisi, iminyaka, ubumi baseMelika, okanye ubume basemthethweni belizwe langaphandle.
I-TIN, okanye iNombolo yeSazisi soMntu oHlawula umrhafi, linani lokulungisa irhafu elifumaneka kuphela kubahlali abathile abangahlali nabemi, abalingane babo kunye nabaxhomekeki abanakufumana i-SSN. Ukufumana i-ITIN, kufuneka ugcwalise iFom ye-IRS W-7, isicelo se-IRS senombolo yesazisi.
Ngubani ekufuneka ezalise le Fom?
Inombolo yesazisi yoMqeshi welinye ilizwe
amaqumrhu angaphandle angengobantu bendalo, oko kukuthi, amashishini angaphandle, njl. njl, kwaye kufuneka ukuba abe nenombolo yesazisi yomqeshi (EIN) yokufaka isicelo sokuxolelwa ekubambeni ngenxa yesivumelwano serhafu. IFomu W-8BEN), kufuneka ungenise isicelo seFom-SS-4 yeNombolo yeSazisi yoMqeshi kwiNkonzo yeRhafu yangaphakathi ukucela i-EIN.
Inombolo yokuchonga irhafu
Amanye amazwe akhupha iinombolo zawo zokuchonga ishishini, ukongeza kwisazisi se-IRS. Ezo ndawo zezi: Massachusetts, New York, kunye South Carolina. Kula mazwe, amashishini afuna inombolo yokuchonga irhafu karhulumente kunye nenombolo yesazisi yerhafu.
Fumana ulwazi oluninzi